के तपाईले सडकमा भेटिएको पैसा उठाउनु भएको छ ? जान्नुहोस् यसको राज के हो ? « गोर्खाली खबर डटकम
तपाई जति नै धनी किन नहोस् वाटोमा पैसा भेटियो भने खुशी अवश्य हुनुहुन्छ । तर तपाईलाई थाहा छ यसरी वाटोमा पैसा भेटाउनुको पछि गहिरो रहस्य हुनसक्छ । ज्योतिर्विद सूरज मिश्राले यसरी वाटोमा पैसा भटिनुको के मतलव हुनसक्छ स्पष्ट वताउनु भएको छ ।
मनछुने भनाईहरु – भगवानले बिना समाधानाको कुनै समस्या बनाएका छैनन
घरेलु उपायबाट यसरी चम्काउनुहोस् २ दिनमै दाँत (हेर्नुहोस् विधिसहित)